10 Imibono Emihle Iningi EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Imibono Emihle Iningi EYurophu
Izigodi eziluhlaza okotshani, izigodlo, futhi amadolobhana amahle, IYurophu inakho izindawo eziningi ezinhle ukuvakasha. Indawo ngayinye izokwenza uzizwe sengathi ungene kubazalwane’ Izinganekwane ze-Grimm, kanye 10 imibono emihle kakhulu eYurophu iyisimo esifanelekile sezinganekwane.
1. Umbono Omuhle Kakhulu EFrance: Isigodi saseDordogne
Amagquma aluhlaza aluhlaza, umfula omangalisayo iDordogne, futhi 5 amadolobhana amangalisayo athola i- “isigodi esihle kunazo zonke eFrance” award make the Dordogne valley’s one of the beautiful views in Europe. Castelnaud is one of the most charming castles in France, esendaweni yomzana omnyama wasePerigord. Imizana esesigodini saseDordogne ihlale ingathintwanga yisikhathi, futhi njengoba uhambahamba ezindleleni nasemigwaqweni, uzozwa ukuthi ubuyele emuva emuva esikhathini kuma-knights nesikhathi sezinganekwane.
Umbono omuhle kakhulu eFrance ngu ngezitimela. You can train travel from Bordeaux in esingaphansi 2 amahora, noma eParis ngaphansi kuka 6 amahora. Lesi sifunda esihehayo sibiza ngokuphelele ukwedlula uhambo losuku.
Amanani eNantes aya eBordeaux
Amanani entengo eParis aya eBordeaux
Amanani entengo yaseLyon kuya eBordeaux
IMarseilles iya eBordeaux Izintengo Zesitimela
2. Vernazza, ICinque Terre Hiking Trail
Ukubukwa kwedolobhana elihle iVernazza eCinque Terre kungenye ye 10 imibono emihle kakhulu eYurophu. Lo muzi onemibala ungomunye wawo 5 imizana emangalisa, equkethe isifunda esimangalisayo seCinque Terre. Izindlu ezinhle ezingemuva koLwandle iMedithera oluhlaza okwesibhakabhaka, dala umbono ofana nomdwebo, emangalisa ikakhulukazi ekushoneni kwelanga.
Ungawubuka lo mbono omuhle ovela eCinque Terre izintaba umzila umbono ohlanganisa konke 5 amadolobhana. Njengoba ukhuphuka umzila, uzobona izivini, izikebhe zokudoba, neCinque Terre ngabo bonke ubukhazikhazi bayo. Kungcono vakashela iCinque Terre entwasahlobo nasekwindla ngoba ehlobo isimo sezulu siba nomswakama impela wokuhamba izintaba, futhi ebusika umzila ungavinjelwa.
Izintengo Zesitimela zaseCorniglia ziye eVernazza
UFlorence waya eVernazza Amanani Esitimela
I-Bologna eya kuVernazza Amanani Esitimela
I-Riomaggiore kuya kuVernazza Amanani Esitimela
3. Umbono Wendawo Enhle Kakhulu eSwitzerland: Rochers De Naye
Imibono yaseSwitzerland kukhuthaze amafilimu nabaculi abaningi, futhi lapho uvakashela isifunda iRochers De Naye nesikaVaud, uzoqonda ukuthi kungani. Ngenkathi abahambi abaningi bekhuphuka intaba ephakeme yaseMalatraix, empeleni kukhona umbono ophefumula ngokwengeziwe ovela kuRocher-De-Naye.
Uma usuphezulu lapho uzobe ubheka iLake Geneva kanye nezicongo zeqhwa ze Izintaba ZaseSwitzerland ngemuva. Lo mbono omuhle eRocher-De-Naye ulungele ukushona kwelanga noma ipikinikini uma uthanda ukuhamba ngezintaba ekuseni.
Isikhumulo sezindiza saseLyon siya entengo yesitimela yaseGeneva
ILucerne iye eGeneva Izintengo Zezitimela
4. Isifunda saseMullerthal
Mullerthal Region has the loveliest views in Luxembourg. Rocky formations, izimpophoma, nemizila eluhlaza ongakhetha kuyo, yipharadesi lokuhamba izintaba. I-Mullerthal ivame ukubizwa ngokuthi yi-Little Switzerland, sibonga ukubukeka kwayo okumangalisayo.
Umbono omuhle kakhulu eLuxembourg yiRiver Sure epaki yemvelo e-Upper-Sure. Ungayithokozela le ndawo ebabazekayo ngokunyuka izintaba Umzila Wendlela kaMullerthal 1. Lo mzila wokuhamba izintaba uhamba nezimfunda eziluhlaza, Inqaba yaseTudor, okwenza kube yinye ye- 10 imibono emihle kakhulu eYurophu.
5. Umbono Omuhle Kakhulu ECzech Republic: IMoravian Tuscany
Amasimu wokuguqa aluhlaza okolusilika, indawo yaseMoravia eCzech Republic iyaheha. Luhlaza ehlobo, ukuqhakaza, futhi ezimibalabala entwasahlobo, imibala yeMoravian Tuscany iyashintsha ngezinkathi zonyaka. Ngakho, noma kunini lapho uya eMoravia, uzothola imibono ehluke ngokuphelele yewele laseTuscany.
Lo mbono omangalisayo eYurophu ungohambo losuku olusuka ePrague. Imizana ebabazekayo yaseSardice, noKarlin noMorave, nikeza ukubukwa okuhle kakhulu kwezinsimu zeMoravian.
6. Austria, I-Alpbach
Izindlu zamapulazi ezenziwe ngokhuni ngemuva kwezintaba ezigcwele iqhwa, Umzana wase-Alpbach muhle. Idolobhana elincane elihle lase-Alpbach lisendaweni eyodwa emangalisa kakhulu e-Austria: ITroli. Izimpophoma ezimangalisa, izindlela zokuhamba izintaba zabahambi abanolwazi noma imindeni enezingane, kunezindlela eziningi zokuhlola indawo nemvelo yase-Austrian.
Ngaphezu kwalokho, ungacwilisa emachibini afudumele ase-Austria, ezitholakala eduze kwalesi sigodi esihle. Umbono omuhle kakhulu we-Alpbach e-Austria umfishane nje ngesitimela kude nesikhumulo sezindiza.
IVienna kuya ku-Landeck Ischgl Amanani Esitimela
EMunich kuya eLandeck Ischgl Amanani Esitimela
Amanani eSitimela aseSalzburg kuya eLandeck Ischgl
I-Zurich kuya ku-Landeck Ischgl Amanani Esitimela
7. Umbono Omuhle Kakhulu EJalimane: Neuschwanstein Castle
Uhlu lwezindawo zokubuka ezihlaba umxhwele kakhulu eYurophu ngeke luphelele ngaphandle kokubuka inqaba. INeuschwanstein Castle eJalimane yi izinqaba ezihlaba umxhwele kakhulu eJalimane futhi inikeza omunye wemibono yemilingo kakhulu eYurophu.
Umbono odume kakhulu weNeuschwanstein Castle uvela ebhulohweni likaMary. Nokho, kuba mnandi kakhulu futhi cishe akunakwenzeka ukuthatha isithombe ngombono odumile. Ngakho-ke, kufanele uqhubeke ukhuphuka intaba futhi udlule umbono weMarienbrucke. Umbono omuhle kakhulu eJalimane uphezulu ngomgwaqo we-zig-zag, kusuka endaweni yesikhulumi ebiyelwe.
8. Abase Netherlands, Idolobhana laseZaanstad
IHolland idume ngama-tulips nangemishini yomoya, emiseleni, kanye nemizi ebukekayo. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi enye yezindawo zokubuka ezinhle kakhulu eNetherlands inakho kokubili. Uma unenhlanhla eyanele yokuhamba entwasahlobo, kufanele uvakashele isigodi saseZaanstad. Lapha uzothola izivunguvungu ezisebenzayo ezinama-tulips aqhakazayo kuyo yonke imibala yothingo lwenkosazana.
9. Umbono Omuhle Kakhulu E-Hungary: IGellertberg Hill EBudapest
Umbono wephalamende laseHungary ungenye yezithombe ezidume kakhulu zaseBudapest. Ungawuthatha lo mbono obabazekayo kusuka eGellertberg Hill. Ngezinye 235 m, uzokwazi ukubona uMfula iDanube kanye nombono obabazekayo wePanoramic waseBudapest.
Ngemibala esawolintshi yokushona kwelanga, amalambu ebusuku, noma ngosuku olucacile lwesibhakabhaka, imibono iyamangalisa. Ngakho, Umbono kaGellertberg Hill ukwenze kwaba ngathi 10 imibono emihle kakhulu eYurophu.
10. I-Chateau De Crevecoeur Esidlweni
Idolobhana elibabazekayo laseDinant lingenye yemizana ebukekayo futhi eyingqayizivele eYurophu. Umbono omuhle kakhulu weDinant, esontweni, umfula, kanti isigodi saseMeuse sivela eChateau de Crevecoeur, Isigodlo esibuhlungu senhliziyo.
Ukubusa indawo enamadwala e-limestone, le nqaba ehlaba umxhwele ibheka iDinant kusukela ngekhulu le-13.
Amanani eBrussels kuya eDinant Train
I 10 izindawo ezinhle kakhulu zokubuka eYurophu zikhuphuke amagquma aluhlaza, lapho kuphela abaphuphi abanesibindi abalinga ukuya khona. Okukhethekile kakhulu, Imibono yaseYurophu ilindele labo abafuna okungavamile, izindawo ezingasetshenziswanga, futhi kude nezixuku.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholide lakho ku- 10 imibono emihle kakhulu eYurophu ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Zokubuka Ezinhle Eziyishumi EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / ru ukuba / fr noma / izilimi de nokuningi.
BeuatifulViewpoints BreathtakingViews EuropeByTrain Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi TravelingbyTrain imibono